आजदेखि काठमाडौंमा भेरोसेलको दोस्रो डोज, कहाँ-कहाँ लगाइन्छ ? – Nepal Online Khabar
भाद्र ११, २०७८ शुक्रबार 363
काठमाडौं : सरकारले को’रोना भा’इरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा आज (शुक्रबार)देखि काठमाडौँमा लगाँइदै छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले तीन दिन अर्थात आइतबारसम्म पहिलो डोज खोप लगाएकाले आफूलाई पायक पर्ने नजिकका केन्द्रमा गएर खोप लगाउन भनेको छ ।
Prevकालसर्प योगको अ’निष्टबाट कसरि जोगीने ?
Nextमनसुन फेरि सक्रिय : रातिदेखि नै देशभर बर्षा, बाढी र पहिरोको ख’तरा बढ्यो !